/Blog/I-Methenolone Enanthate/I-Methenolone Inanthate powder yokuthengisa: Izinto ze-4 zokusebenzisa i-Primo ngokuchanekileyo!
ezaposwa ngomhla 02 / 01 / 2018 by UDkt Patrick Young bha liweyo I-Methenolone Enanthate.
Kwinqaku lethu langaphambili malunga I-Methenolone Inanthate powder, sele sisazi iingcebiso esifanele siziqonde ngaphambi kokuba sithenge i-Methenolone Enanthate powder, njengeyiphi i-Methenolone Enanthate powder, indlela yokuthenga i-Methenolone Enanthate powder, njengento ebonakalayo ye-Methenolone Enanthate, yinto eyaziwayo kwi-intanethi, emva kokuba uthenge, ndibethe abantu abaninzi unombuzo owodwa, yindlela yokuyithatha ngokuchanekileyo, ngaba kukho nayiphi na into esifanele siyiqwalasele, namhlanje, ezininzi iingxaki zakho ziya kuxazululwa.
Yintoni i-Methenolone Enanthate esetyenzisiweyo? / Iinzuzo ze Primobolan
Ngaphambi kokuba uthathe i-Methenolone Enanthate powder okanye uthathe isigqibo sokuthenga i-Methenolone Enanthate powder, izinto ezibalulekileyo omele uzi ukuba yiyiphi i-Methenolone Enanthate esetyenzisiweyo? Masifunde malunga nayo.
Ukuba ngaba kukho i-steroid engathi ithathelwe ingqalelo "epheleleyo" (okanye ngokugqibeleleyo njengoko inokuthi ibe nayo), iya kuba yi-Primobolan. Kucingwa nje ngokuba yinto ekhuselekileyo neyona nto ikhuselekileyo ye-anabolic steroid, ineemiphumo emibini kwaye iphumelele kakhulu. Ngoko kutheni u-Primobolan ungasetyenziswe ngumntu wonke? Izizathu zinokuthi zininzi kwiingcamango eziphosakeleyo ezi malunga neli gciwane elimangalisayo.
I-Primobolan ayiniki ukufumana ngokukhawuleza, okanye ngokuchanekileyo, ayibangele ukwanda ngokukhawuleza ekugcinweni kwamanzi, ngoko kubonwa ngokuba "buthathaka", kodwa ngokubhekisele kwakha isistim esomeleleyo, enye ye-steroids efanelekileyo kakhulu. Ngenxa yokuba uPermolan akanalo miphumo echaphazelekayo isetyenziswe ngabadlali abadala kunye nabasetyhini.
Uninzi lwabasebenzisi banoluvo lokuba i-Primobolan isetyenziswe kakuhle ekujikelezeni imijikelezo. Akunakwenzeka ukuba i-Primobolan ibe negalelo kuyo nayiphi na indlela ephakamileyo yokuxuba ukukhula komzimba kodwa kuyisiritidi ecacileyo xa kuziwa ekulondolozeni izicubu zakho ezixhaphakileyo. I-Primobolan iye yafumana udumo lokuba enye yezinto ezingabonakaliyo ze-anabolic steroids ezinokuthi ziqalise ngokutsha ukulahlekelwa kwintlawulo kubasebenzisi. Le mpawu ikwabelana namanye amaninzi e-anabolic steroids kodwa iziphumo zayo zaziwa ngokuba zichanekileyo.
Inzuzo enkulu ye-Primobolan kufuneka ibe yindawo ephephile xa ilawulwa anabolic steroid abasebenzisi besini esilungileyo. Phantse, zonke i-steroids eziphuma apho zixinzeleleke kakhulu kwiimfazana, kodwa izinto ezifunwa ngu-Primobolan kunye no-Anavar zixhomekeke kakuhle. Kubafazi abasebenzisa i-steroids, i-Virilization (Ukuphuhliswa kweemeko zesini) yinkxalabo enkulu. Ngokusetyenziswa ngokufanelekileyo, oku kunokukhutshwa ngabo bonke abasebenzisi. Ukuba iimpawu ziqala ukubonisa, ukuphela nje ukuyeka kunye ne-steroid kuya kutshabalalisa ubukho babo. Abafazi bathanda i-Primobolan kuba yenye yee-steroids apho banokuyonwabela imiphumo ye-anabolic steroids kwaye akufuneki ukuba bajongane neengxaki ezibi kakhulu ze-steroids ngokubanzi ziza nazo. Kukho ke, akukho ukubuyela kwi-Virilization xa isiphumo sayo sisetyenziswe ngokusisigxina, ngoko umntu kufuneka ahlale ekhangelelwe iimpawu eziphazamisayo.
Isilinganiselo sezonyango seMethenolone Enanthate powder
I-Methenolone Inanthate i-powder dosage ye-body building
Abasebenzisi bokuqala be-Primobolan baqhele ukuba bafumane i-400mg ngeeyure ze-Primobolan zeeyure zokwanela ngokwaneleyo ukunceda umsebenzisi ekuphumezeni iinjongo zabo. Kukho nantoni na imfuneko yokuba baqalisi baqhube phambili kwi-400mg nganye ngeveki ngenxa yokusetyenziswa kokuqala kunye nokuvumela umntu ukuba aqokelele ukuvakalelwa kokusebenza kweziyobisi. Amanani e-Primobolan ephakathi aya kuhlamba kwi-400 - 700mg ngeveki, edlalwa ngokusondeleyo ekupheleni kwe-700mg ngeveki.
Abasebenzisi abaphakathi baya kufumana amandla ase-Pribobolan angabonakaliyo ngokuthelekiswa namanye ama-anabolic steroids, kwaye kufuneka asetyenziswe kumaxabiso aphezulu ukuze abone nayiphi na inguqu yomzimba / yokusebenza kuphela ku-Primo.
Abasebenzisi abaphambili baya kuphelisa ngokusebenzisa i-Primobolan dose kwi-800 - 1,000mg ngeveki okanye ngaphezulu. Ngenjongo yokulondoloza ubunzima obubuthakathaka ngexesha lomjikelezo wokusika, amayeza e-Primobolan akufuneki ukuba asebenze oku phezulu kodwa ngokuqhelekileyo, ezi zi-doses ezifunekayo ukwenzela ukwanda kwamanani omzimba obonakalayo ovela kwi-steroid ebuthakathaka e-anabolic njenge-Primobolan. Nangona kunjalo, xa ugijimayo kwi-dose efanelekileyo yeziphumo ezinjalo, i-Primobolan inokubeka umboniso njengenye yeyona ndlela enomdla kakhulu ye-anabolic steroids apho kukho ukudibanisa kwesigxina esinyamekayo.
Abasebenzisi besibhinqa baya kufumana i-physique kunye nokunyusa ukusebenza kwe-Primobolan dosages kwi-50 - 100mg nganye ngeveki ngaphandle kwemiba yeempembelelo zecala kunye nempawu. I-format ye-Primobolan, kodwa, inexabiso elincinane lokusetyenziswa phakathi kwamabhinqa ngokuthelekiswa nokuhlukahluka komlomo ngenxa yeengxaki malunga nokulawulwa kwamanqanaba eplasma yegazi kunye nexesha kunye nokucwangciswa kolawulo lwe-injection ukufezekisa oku.
I-Methenolone Inanthate / Primobolan yokuBhikisha okanye ukuCheka
I-Primobolan yenye yezinto ezimbalwa ze-steroids ezilungele ukumbumba kunye nokusika. Inyaniso iyatshelwa ukuba, akukho zinto ezinjalo "njenge-bulking steroid" okanye "i-steroid yokusika" yiyo kuphela into eyenza ukugcinwa kwamanzi ngaphezu kwamanye. Oku kungasebenza kumsebenzi wakho ukuba ukhangele ukubeka isisindo (nokuba ubunzima bamanzi) ukwenzela ukuba umzimba wakho ulungelelwe ubuninzi. Yaye umvakalelo wokuhlambalaza kwiikhatile zakho zeekhati ziyakonwaba. Kodwa ngaphaya kokugcinwa kwamanzi, ukuxubha kunye nokusika kunomdla wokutya. I-Primo ayiyi kuvelisa ukunyuka okukhawulezileyo kwisisindo somzimba ngokwawo, kodwa ukuba iikhalori zinyuswe izidakamizwa ezimangalisayo zokubhukuda ngaphandle kwe-bloat. (Yintoni abanye abantu ababiza ngokuba "inqwaba eqhelekileyo"). Ngokuqinisekileyo, kwi-calmo deficit Primo iya kudala ukukhula kwemisipha, okwenza ibe yinto enqwenelayo kumalungu omncintiswano omzimba kwiiveki ezimbalwa zokugqibela ngaphambi komncintiswano.
I-Methenolone Enanthate / Primobolan ukuxakisha
Ukongezelela, yinto ethandwa kakhulu kumzimba womzimba ukubeka iPramobolan kunye nezinye (ezinamandla ngokubanzi) i-steroids ukuze zenzele umphumo ophuthumayo nangaphezulu. Ngexesha lokutya okanye isigaba sokusika, i-androgen engenayo i-aromatizing njengeHalotestin okanye i-trenbolone ingongezwa. Icandelo elinamandla kunye ne-androgenic kufuneka lincede ukuzisa ubuninzi obuninzi kunye nobunzima kwimisipha. Ngakolunye uhlangothi (okanye ukongeza) sinokuyongeza iWinstrol, enye i-anabolic steroid emnene. Isiphumo salolu dibiswano kufuneka siphinde sibe nenyuka ephawulekayo yobunzima bomzimba kunye nobunzima, kodwa kulo mzekelo inzuzo ayifanele ihambisane nemiphumo emibi kakhulu. Njengoko kukhankanywe ngaphambili, i-Primobolan Depot isetyenziswe ngempumelelo ngexesha lokuqhawula uqeqesho. Ukongezwa testosterone-enanthate, Dianabol or Anadrol I-50 iya kubonisa ukuba isebenzisekile ukufaka ubuninzi bemisipha emitsha. Enyanisweni siya kufuneka sibhekane nemiphumo yecala ye-estrogenic, kodwa kwiimeko ezinjalo i-Primobolan kufuneka ivumele umsebenzisi ukuba athathe umlinganiselo ophantsi kakhulu weziyobisi "ezinobuthi" kwaye ufumana iziphumo ezifanelekileyo.
tags: I-Methenolone Inanthate powder, I-Methenolone Enanthate powder yokuthengisa
Thenga i-Methenolone Inanthate powder: musa ukuyithenga ngaphambi kokuba wazi ezi !!!	Thenga i-meridiya powder online: Izinto ze-6 omele uzi!